5 Atụmatụ SMM Explosivos De Semalt Para A Mejor Rendimiento nke SEO
Social Media Marketing (SSM) bụ nke kachasị ahịa nke ahịa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke azụmahịa. Nke a bụ ihe ọ bụla na-eche banyere SEO, ma ọ bụ ahịa ahịa ma ọ bụ ahịa. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ndị SSM na-eme ka ndị ọzọ mara mma, ọ ga-eme ka ha mara.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na SEO de Ọkachamara , Andrew Dyhan, bụ onye na-achọpụta ihe ọ bụla nke SSM - opi grain storage.
Ndị na-elebara anya na-emetụta ndị mmadụ na ibe ha. Una vez que hayas determinado ị na-elebara anya nke ọma, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka azụmahịa na ahịa na ahịa. Averigüe quien está hablando sobre temas que interesan a su negocio, na-eme ka a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-eme ka ha mara mma.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Obi ụtọ na-eme ka ha na-eme ka oge na-aga. Ihe ọmụma zuru ezu, ozi ọma na ihe omume na-eme ka ndị ọzọ na-akọwa ozi.
2. Ị nwere ike ịba uru maka mmadụ
Udo nke pasos cruciales en el marketing de redes sociales es garantizar na ndị na-akọwapụta aha gị bụ ndị na-akọwa ozi ọma. Contenido bien organizado con detalles del nombre de su empresa, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla nke ozi njirimara nke na-ezigara na ndị na-ederede aha. Ọ bụrụ na ị na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ị nweta ozi nke ozi gị na ozi gị na ozi gị. N'ozuzu, Google na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ka ndị ọzọ mara mma..
3. Ihe nkedo nke ndi mmadu na ndi negocios y personas influyent
Nke a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ onye na-achịkwa SSM. Ọ bụrụ na ị na-agụnye ndị na-ede blọgụ na ndị na-ede blọgụ na oge na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe banyere ha. Lea, comente y comparta su contenido cuando sea apropiado. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla, ị ga-achọpụta na ọ bụ naanị na ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị ga -
Ihe ndị ọzọ na-egosi na ha nwere ike ịbanye na ha niile na-eme ka ha na-enwetakwa un fragmento. Ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịkọwa ihe dị mkpa; ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na a na-edepụta aha ya.
Ọ bụrụ na ọ bụ nke a, ọ na-arụ ọrụ nke a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe, aumenta las posibilidades de que su publicación se incluya en los SERP y aumenta sus oportunidades de conversión.
¿Ọ bụrụ na ị na-ahụ maka ndị mmadụ na nwa ya nwoke? Las redes sociales tienen la capacidad de compartir con una gran audiencia. N'ihi ya, ị nwere ike na-eme ka ha na-enweta ọtụtụ kilomita site na nuevos espectadores. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ahịa ha na-eme mgbanwe.
5. Ebube na adres entrantes para ganar más autoridad
Ị nwere ike ịmepụta aha ahịa nke azụmahịa iji chebe ndị ahịa na ndị ahịa na ndị isi obodo na-eme ka ha mara. Los enlaces entrantes determinan la autoridad de un sitio. La autoridad es cuán respetable o confiable bụ onye na-aga ozi ọma. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị dị mkpa na Google na-eme ka a na-eme nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-abanye n'ime ụlọ ọrụ, ha nwere ike ịbanye ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịbanye ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịbanye ma ọ bụ ndị ọzọ na-abanye. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla dị iche iche, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, dị ka ihe atụ na-egosi na ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị na ya.
Usoro nke SSM kwadoro nke a na-eme ka a na-emekọrịta ihe n'etiti SEO. SSM bụ otu akụkụ dị iche iche nke ihe ncheta nke ahịa nke ahịa ahịa, na-eme ka ndị ahịa na-eme ka a na-elebara anya na a na-eme ka a na-eme ka ọ dị mfe.